ဝိမုတ္တိသုခ (The Bliss Of Emancipation): 2010
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေထဲမှာ ဆရာနေဇင်လတ် ရဲ့  စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်မိရာကစလို့Power ဆိုတဲ့စကားလုံးက အတွေးထဲကို ရောက်ရောက်လာပါတယ်။ ဆရာကတော့ အဲဒီစာအုပ်ထဲက ဆောင်းပါးတွေထဲမှာ Power အမျိုးမျိုးအကြောင်းကို အကျယ်ချဲ့ ပြီးရှင်းပြထားလေရဲ့ ။ Personal Power က စလို့Positional Power, Constitutional Power, Social Power, Economic Power, Military Power, National Power, Technical Power, Political Power, Intuitive Power, Charismatic Power စသည်ဖြင့်ပေါ့။ နောက် ပါဝါတွေကို အုပ်စုလိုက် အမျိုးအစားတွေခွဲပြပြီး ရှင်းပြထားပါသေးတယ်။
ပါဝါရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကလည်း အသုံးပြုတဲ့နယ်ပယ်ပေါ်မူတည်ပြီး အမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုပုံကွဲပြားတယ်။ အဲဒီအဓိပ္ပါယ်တွေအများကြီးထဲမှာ “Power is the ability to influence the behavior of others.” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ကျွန်တော်အခုရေးနေတဲ့ အကြောင်းအရာနှင့် အနီးစပ်ဆုံးတူနေတာကို သတိပြုမိပါတယ်။ ပြောရရင် အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်တဲ့ Personal Power ပေါ့။ လူတစ်ဦးဆီ တစ်ဦးဆီက မိမိတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပါဝါကို တိုးတက်ဖွံ့ ဖြိုးလာအောင် ကြိုးစားနိုင်ကြရင် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘာများဖြစ်လာနိုင်မလဲလို့ တွေးမိတဲ့သဘောပါ။
ဆရာနေဇင်လတ်ရဲ့ စာထဲမှာ မဟတ္တမဂန္ဒီကြီးနှင့် Personal Power ကို ဥပမာပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဂန္ဒီကြီးရဲ့  Personal Power အားကောင်းမှုဟာ အိန္ဒိယတမျိုးသားလုံးရဲ့  နယ်ချဲ့ ဆန့်ကျင်ရေးစွမ်းအား People Power ကို ဖြစ်စေခဲ့တယ်တဲ့။
ဆရာ့စာကိုဖတ်ရင်း လူတစ်ဦးချင်းဆီရဲ့  Personal Power က အားကောင်းရင် ကောင်းသလောက် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရိုက်ခတ်နိုင်၊ ကူးစပ်နိုင်ပြီး အားကြီးတဲ့ အင်အားထု၊ အသိုင်းအ၀န်းတစ်ခု၊ နောက်ဆုံး Revolution တစ်ခုအထိ ဖြစ်သွားနိုင်စေတဲ့အကြောင်းကို ကိုယ့်ဖာသာဆက်တွေးမိပါတယ်။ (စာဖတ်သူများကိုလည်း ဒီအကြောင်း ဆက်ပြီးတွေးစေချင်ပါတယ်။)
လောကရဲ့ အထွဋ်အမြတ်ဖြစ်တော်မူတဲ့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့  Personal Power အားကောင်းမှုကို သာဓကအဖြစ် ယူကြည့်မိပါတယ်။ အရှင်မြတ်ရဲ့ ပါရမီအဟုန်တို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ Personal Power ကြီးမှာ သဗ္ဗေညုတဉာဏ်တော်ကြီးနှင့် ပေါင်းစပ်လိုက်တော့ Dhamma Power ကိုပါ ထပ်ဖြစ်စေပြီး တစ်လောကလုံးအတွက် နိဗ္ဗာန်လမ်းစဉ်ကို ဦးဆောင်ခေါ်ယူနိုင်ပါတော့တယ်။ အရှင်မြတ်နှင့် တွေ့ကြုံဆုံတွေ့လိုက်ရတဲ့သူတိုင်းဟာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ စိတ်ကျေနပ်မှု၊ အေးချမ်းမှုကို ရရှိခံစားသွားတတ်ကြပါတယ်။ အနိမ့်ဆုံးအဆင့် ရန်ပြုဖို့လာတဲ့သူတောင်မှ အရှင်မြတ်ရဲ့ သာဝကအဖြစ် ကို ကျေကျေနပ်နပ်ရောက်သွားကြရတယ်။ သတ္တ၀ါတွေရဲ့  သံသရာအစဉ်အဆက်က စွဲကိုင်လာခဲ့ကြတဲ့ အတ္တနှင့်ယှဉ်တဲ့ အယူမှားတွေကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ကြပြီး အနတ္တလမ်းအတွက် Revolution အသစ်တစ်ခုကို စတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Personal Power အကြောင်းတွေးနေတုန်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါပဲ။ ဟိုးရက်အနည်းငယ်က ဒီဂျပန်ကို ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓသာသနာပြုပီနန်ဆရာတော်ကြီး ကြွရောက်သီတင်းသုံးခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီးကို အနီးကပ်လေ့လာတော့လည်း ဆရာတော်ကြီးရဲ့  Personal Power အားကောင်းမှုကို သတိထားမိဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဆရာတော်ကြီးရဲ့  လုပ်ရင်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်၊ ဘာအခက်အခဲပဲရှိရှိ နောက်ဆုတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိတဲ့ ဇွဲလုံ့လ၊ မိမိကိုယ်တိုင်နှင့် တပည့်ဒကာဒကာမတွေကို Control လုပ်နိုင်တဲ့ Leadership ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို ဖူးလိုက်ရတဲ့အချိန် ခဏလောက်မှာတင် အကဲခတ်မိလိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ သာသနာပြုအလုပ်တွေကို အောင်အောင်မြင်မြင် လုပ်နေနိုင်တာကိုးလို့စိတ်ထဲရှင်းရှင်းလင်းလင်း သဘောကျကျေနပ်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီရက်ပိုင်းထဲမှာပဲ ရန်ကုန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်က ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။ နေ့စဉ် အွန်လိုင်းမှာရှိသမျှ အန်တီစုရဲ့ သတင်းတွေ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ သတင်းမှန်သမျှ လိုက်ရှာဖတ်၊ နားထောင်၊ ကြည့်ရှုဖြစ်တော့ အန်တီ့ရဲ့  Personal Power ကလည်း အရှိန်အဟုန် ကြီးကြီးနှင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးကသူတွေဆီ ရိုက်ခတ်နိုင်တာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ပင်ကိုယ်ကအရည်အချင်းပြည့်ဝခဲ့သူဖြစ်တဲ့အပြင် မိမိအကျိုး၊ မိသားစုအကျိုးကို မငဲ့ဘဲ လူတွေအပေါ်ထားတဲ့ သူ့ရဲ့  စေတနာ၊ မေတ္တာဓာတ်က လူတွေရဲ့  စိတ်ဘ၀င်ကို ခိုက်စေပါတယ်။ သူနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမှာကို ကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိနိုင်သလို၊ မကြိုက်တဲ့သူတွေလည်းရှိနေမယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူဟာ ကမ္ဘာ့လူထုက အသိအမှတ်ပြု ဦးညွှတ်လိုက်ရတဲ့ စံပြအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ဘယ်သူငြင်းနိုင်မှာလဲ။
ဒီလို တိုင်းကျော် ပြည်ကျော် ကမ္ဘာကျော်အောင် Personal Power ကောင်းကြတဲ့ သူတွေရှိသလို ကိုယ်နေထိုင်လှုပ်ရှားနေရတဲ့ ၀န်းကျင်သေးသေးလေးထဲမှာပဲ မိမိရဲ့ Personal Power နှင့် ကိုယ်နှင့်တွေ့ကြုံထိစပ် ဆက်ဆံနေရတဲ့သူတွေကို အလင်းဓာတ် ပေးနေတဲ့သူတွေလည်း နေရာအနှံ့မှာ ရှိနေကြတာပါပဲ။
မြန်မာစကားမှာ “တံငါနားနီး တံငါ၊ မုဆိုးနားနီး မုဆိုး” ဆိုတာရှိပါတယ်။ မိမိပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မူတည်ပြီး လူတွေရဲ့  အပြုအမူ၊ အနေအထိုင်၊ ဓလေ့စရိုက်တွေ ကူးစက်ပြောင်းလဲသွားတတ်ပုံကို ညွှန်းဆိုချင်တဲ့ ဆိုရိုးစကားအဖြစ် အပြောများကြပါတယ်။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 11:09 AM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 12:44 AM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:21 AM0comments Links to this post
ငြိမ်းချမ်းရေးစိတ်နှင့်ဝေးကွာသူများက "Might is Right" ဟူသော “အင်အားအခြေခံ” အယူအဆကို ကျင့်သုံးကြသည်။ ထို့ကြောင့် တစ်ချိန်က ဗြိတိသျှအင်ပါယာကြီးကို နေမ၀င်အင်ပါယာအဖြစ် ထူထောင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ အင်အားဟူသော Power တစ်ရပ်ရရန် ရယူနိုင်သောနေရာ အများအပြားရှိသည်။ Sources Of Power ဖြစ်သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးစိတ်ဓာတ် အခြေခံသူများက ဤသို့သောပါဝါကို အမှန်တရားသည်သာ အင်အားဟူသော "Right is Might" မှ ရယူကြသည်။ ဤတွင် လောကကြီးသည် ဓမ္မနှင့် အဓမ္မတို့အားပြိုင်ရာ သလင်းပြင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ သမိုင်းမတင်နိုင်မီခေတ်တွင်ရော၊ သမိုင်းတင်နိုင်သည့် ခေတ်မှာရော ဤအားပြိုင်မှုသည် အမြဲတစေ ရှိနေခဲ့ပါသည်။ လူတို့ ငြိမ်းချမ်းရေးစိတ်ဓာတ် မပိုင်ဆိုင်နိုင်သေးသရွေ့  ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေမည့်အရာ ဖြစ်သည်။
သတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးတွင် နှစ်မျိုးသာခွဲခြားထားသည်။ “လူ”နှင့် “တိရစ္ဆာန်” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ မရေမတွက်နိုင်သော သတ္တ၀ါတို့တွင် တစ်မျိုးတည်းသောအရာကို “လူ” ဟု တစ်တန်းထားပြီး၊ ကျန်အရာများကို တိရစ္ဆာန်ဟု သတ်မှတ်ရခြင်းမှာ “အသိပညာ” ပေါ် အခြေခံ၍ဖြစ်သည်။ အသိပညာထူးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်သောသူမျိုးဖြစ်၍ “လူ” ဟု သတ်မှတ်ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျန်တိရစ္ဆာန်တို့သည် “အိပ်၊ စား၊ ကာမ” ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်(၃)မျိုးအတွင်းမှာသာ ရှင်သန်ကြ၏။ ထို့ ထက် ပို၍ မရှိနိုင်၊ လောကကောင်းကျိုးကို မသိ၊ ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို နားမလည်၊ သူတို့လောကတွင် “Might is Right" ဟူသော အင်အားသည်သာ အဓိကဖြစ်၏။
လူတွင်ကား ထိုသို့မဟုတ်၊ “အသိထူး” ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြ၍ အမှားအမှန်ကို ခွဲခြားနိုင်သည်။ လောကကို အလှဆင်နိုင်ခွင့်လည်း ရှိသည်။ “အိပ်၊ စား၊ ကာမ” ထက်ပိုသော ရည်ရွယ်ချက်၊ အတွေးအမြင်များလည်း ရှိနိုင်ကြသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို နားလည်နိုင်ခွင့်ရှိသည်။ "Right is Might" သည် လူသားများအတွက် ထားလိုလျှင် ထားနိုင်သော အယူအဆတစ်ရပ်ဖြစ်သော်လည်း လူတို့သည် တိရစ္ဆာန်များထက် ပို၍ အတ္တကြီး၊ လောဘကြီး၍ အများစုက မထားခဲ့ကြ၊ တိရစ္ဆာန်များက တစ်ဝမ်းစားရလျှင် ကျေနပ်စိတ်ဖြင့် တင်းတိမ်နိုင်ကြသော်လည်း လူတို့က အတ္တစိတ်များသဖြင့် ရုပ်ဝတ္ထု ချမ်းသာမှုတို့အတွက် အတောမသတ် လောဘထားတတ်ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်တို့ထက် အဆများစွာပို၍ ဖောက်ပြန်တတ်သော သတ္တ၀ါလည်းဖြစ်သည်။ ပရိယာယ်ပိုသော သတ္တ၀ါလည်းဖြစ်သည်။ လူတို့တွင် တင်းတိမ်စိတ် အလျဉ်းမရှိတတ်ကြ၊ အတ္တ၊ လောဘတို့က ထူးသောအသိကို တလွဲသုံးစေရန် လှုံ့ဆော်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အသိထူးရနိုင်ခွင့် ရှိကြသော်လည်း ပညာအဖြစ်သို့ မပြောင်းနိုင်လျှင် လူသည် လောကတွင် ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံး သတ္တ၀ါအဖြစ်သို့ ရောက်တော့သည်။ တချို့ က အသိတစ်ခုကို ပညာသို့ ရောက်ပြီဟု ယူဆကြသည်။ တကယ်ပညာအဖြစ်သို့ မရောက်သောအခါ အနုတ်သဘောဆောင်သော ရလဒ်တို့ကို ရတော့သည်။
မြန်မာပညာရှိတို့က ပညာတတ်မှုနှင့် ပညာရှိမှုကို ကြွက်(၄)မျိုးနှင့် ဥပမာပြုခဲ့သည်။
(၁) တွင်းတူးလျက် မအောင်းသောကြွက် (စာတတ်သော်လည်း အမှန်မသိသူ)
(၂) အောင်းလျက် မတူးသောကြွက် (စာမတတ်သော်လည်း အမှန်သိသူ)
(၃) တူးလည်းတူး၊ အောင်းလည်း အောင်းသောကြွက် (စာလည်းတတ်၊ အမှန်လည်းသိသူ)
(၄) တူးလည်းမတူး၊ အောင်းလည်း မအောင်းသောကြွက် (ဘာမှမသိ၊ ဘာမှမတတ်သူ)
လောကတွင် အမှားကို အမှန်ဟုထင်မြင်၊ ခံယူထားကြသောသူများ အများအပြားရှိသည်။ နောက်လိုက်ဘ၀တွင် သူတို့၏အမှားကြောင့် ၀န်းကျင်အတွက် မထောင်းသာလှသော်လည်း၊ ခေါင်းဆောင်တို့တွင် ဤလွဲမှားသော အရည်အချင်း ကပ်ငြိပါက လောကအတွက် အန္တရာယ်ကြီးသည်။ တစ်ချိန်က ဂျာမနီမှ ဟစ်တလာ၊ အီတလီမှာ မူဆိုလီနီတို့သည် ဤမှာယွင်းသော အယူအဆများကို အမှန်ဟုယုံကြည်မှု ထားရှိခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:00 AM0comments Links to this post
ဂန္ဒီကြီးသည် ငြိမ်းချမ်းရေးစိတ်ကို အပြည့်အ၀ပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်၏။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးအတွက်ဟူသော ရည်မှန်းချက်ကိုသာ ထားရှိခဲ့သူဖြစ်သည်။ ထို့ထက်ပို၍ ဘာမှမရှိ၊ သူ၏ မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာတို့သည် အကြားအလပ်မရှိ ထင်ရှားသည်။
ဗုဒ္ဓက လောကအမြင် (၆)မျိုးကို ခွဲခြားပေးခဲ့သည်။ ဤအမြင် (၆) မျိုးသည် အမှန်စင်စစ် ပညာလည်းဖြစ်သည်။ ဤ (၆)မျိုးဖြင့် မျှတစွာကြည့်နိုင်ပါက "An eye for an eye" သည် မရှိနိုင်တော့။
(၁) တတွ ဒဿန (ရှိ/မရှိ ရှုထောင့်မှ မြင်ခြင်း)
(၂) ပမာဏ ဒဿန (အမှား/အမှန် ရှုထောင့်မှ မြင်ခြင်း)
(၃) တက္က ဒဿန (သင့်/မသင့် ရှုထောင့်မှ မြင်ခြင်း)
(၄) အာစာရ ဒဿန (ကောင်း/မကောင်း ရှုထောင့်မှ မြင်ခြင်း)
(၅) ရသ ဒဿန (ခံစားမှု ရှုထောင့်မှ မြင်ခြင်း)
(၆) စရိက ဒဿန (၀ါသနာနှင့် စရိုက်ရှုထောင့်မှ မြင်ခြင်း)
ဤရှုထောင့် (၆) မျိုးကို ရှုမြင်ရာတွင် လူတိုင်း တစ်ထပ်တည်းမကျနိုင်။ “အတ္တ” က ရှုမြင်ပုံမတူရန် တွန်းအားပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အကွာအဟနည်းပါးရန် ကောင်းသည်။ သာမန်လူသားများအတွက် မထောင်းသာလှသော်လည်း ခေါင်းဆောင်ကြသည့်သူများ၊ ဤအမြင်ရှုထောင့်များတွင် ဆန့်ကျင်ကြပါက...လောကသည် အနိဋ္ဌာရုံသို့ ရှေးရှုရသည်။
ခေါင်းဆောင်များသည် လောကကြီး ဣဋ္ဌာရုံဖြစ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ မျိုးဆက်ဟောင်းတို့သည် မျိုးဆက်သစ်တို့အတွက် ကောင်းမွေပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။ မျိုးဆက်ဟောင်းတို့သည် မျိုးဆက်သစ်တို့အတွက် အာဝါသကောင်း၊ ရေခံမြေခံကောင်းများဖြင့် ရှင်သန်ခွင့်ရှိရန် ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့လိုသည်။
အတိတ်သူတို့ ကြိုးစားခဲ့ကြရခြင်းမှာ ပစ္စုပ္ပန်သူများအတွက်ဖြစ်သည်။ သို့ဆိုလျှင် ပစ္စုပ္ပန်သူတို့ ကြိုးစားရခြင်းမှာ အနာဂတ်မျိုးဆက်တို့အတွက်သာ ဖြစ်သင့်သည်။ အမွေကောင်းတို့ကို ချန်ထားနိုင်ခဲ့ရန်သာ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သင့်သည်။ ဤအယူအဆကို အခြေခံရပ်တည်ချက်အဖြစ် ယုံကြည်ပါက အေးချမ်းမှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှု၊ အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတို့သည် စကားအမယ်ဖွဲ့သည့် အဆင့်တွင်ပင် မရှိနိုင်တော့။ သို့သော်လည်း လောကအမြင် (၆)မျိုးမှ မှန် မမှန်၊ သင့် မသင့်၊ ကောင်း မကောင်း စသည်တို့ကို အများစုက ကောင်းစွာ မခွဲခြားနိုင်ကြ၊ ထို့ထက်ပို၍ ခံစားမှုရှုထောင့်ကို ဦးစားပေးကြည့်သောအခါ Conflict ဟူသော ၀ိဝါဒကွဲပြားမှုများ ကြီးထွားလာကြရသည်။
“လောကကြီးနှင့် မျိုးဆက်သစ်တို့” ဟူသော ရည်မှန်းချက်ကို ဖျက်ဆီးသည့်အရာသည် အဂတိတရား (၄)ပါးလည်းဖြစ်သည်။ လူတို့ အဂတိတရား (၄)ပါးနှင့် ကင်းလွတ်သောအခါ Self Interest ဟူသော ကိုယ်ကျိုးစီးပွား ဦးစားပေးမှုကို ဆောင်ရွက်နိုင်ကြတော့၏။
(၁) ဆန္ဒာ ဂတိ (အလိုဆန္ဒကြောင့် ဖောက်ပြန်မှု)
(၂) ဒေါသာ ဂတိ (ဒေါသကြောင့် ဖောက်ပြန်မှု)
(၃) မောဟာ ဂတိ (အမှား-အမှန် မသိမှုကြောင့် ဖောက်ပြန်မှု)
(၄) ဘယာ ဂတိ (ကြောက်ရွံ့ မှုကြောင့် ဖောက်ပြန်မှု)
လူသည် အတ္တ၏ သားကောင်ဖြစ်သည်။ အတ္တနှင့်ယှဉ်၍ မွေးဖွားလာကြသူများလည်း ဖြစ်သည်။ လောက၏ ပညာကိုရှာရင်း အတ္တနှင့် ပရကို မျှတစွာ ကျင့်ကြံလာကြရသည်။ ပညာနုံ့သူများမှာ မျှတစွာ မကျင့်ကြံနိုင်ကြ။
အနာဂတ်ကို ကြီးကြီးမားမား ဖန်တီးခွင့်ရှိကြသူများ၊ လောကကို သာမန်ထက်ပို၍ အလှဆင်နိုင်ကြမည့်သူများ အတ္တ-ပရ မျှတစွာရှိရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။
နေ့စဉ်သတင်းများတွင် ဣဋ္ဌာရုံထက် အနိဋ္ဌာရုံတွေက ပိုများနေသည်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း တော်တော်များများမှာ တည်ငြိမ်မှုဆိုတာ ဘာလဲဟု မေးယူရလောက်အောင် ဖြစ်နေ၏။ လူတွေအချင်းချင်း အတ္တရှေ့ ထား၍ အနိုင်ရယူလိုမှုအတွက် ရသမျှနည်းလမ်းတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြသည်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ပျက်ကပ်ကြောင့် အရပ်ကယ်ပါ၊ လူဝိုင်းပါ ဖြစ်နေကြရသည့်အထဲ ဗုံးခွဲမှုတွေ၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေက အရှိန်ကျဟန်မတွေ့ရသေး။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကလည်း တစ်ခါတစ်ခါ ခပ်ကြမ်းကြမ်းနှောက်လိုက်သေးသည်။ လုပ်ပိုင်ခွင့်အတော်အားနည်းရှာသော ကုလသမဂ္ဂကြီးမှာ အမှုအခင်းတွေက အပုံအပင်၊ တစ်နိုင်ငံမှလည်း ကောင်းကောင်းမလိုက်နာကြ။
ကမ္ဘာကြီးသည် ဦးနင်းပဲ့ထောင်၊ ပဲ့နင်းဦးထောင်ဖြစ်နေပြီလားဟုပင် တစ်ခါတစ်ခါ တွေးမိရသေးသည်။ အရာအားလုံးသည် အတ္တကြီးမားမှု (Egocentric) ဟူသော ကိုယ့်အတွက်သာ ပဓာနထားသည့်စိတ် လွန်ကဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရသော ရလဒ်ဖြစ်သည်။ အသုံးလှစေရန် National Interest ဟူသော “အမျိုးသားကိုယ်ကျိုးစီးပွား” စကားလုံးဖြင့် တချို့ က ဖလှယ်သုံးစွဲကြသည်။ အတ္တသည် အတ္တသာဖြစ်သည်။
လူ့သမိုင်းမှတ်တမ်းပြုနိုင်သည့် နှစ်ပေါင်း (၅၅၀၀) ကျော်အတွင်း စစ်ပွဲပေါင်း (၁၄၅၀၀) ကျော် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူသန်းပေါင်း ရာနှင့်ချီ၍ သေကြေပျက်စီးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
“ယောနိသော မနသိကာရ” ကို ဗုဒ္ဓက အလေးထားဟောကြားခဲ့သော်လည်း အများစုက “အယောနိသော မနသိကာရ” ဖြစ်နေကြသည်။ အတတ်ပညာ တစ်ဟုန်ထိုး တိုးတက်လာသောကြောင့် အသိပိုင်းတွင် ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်လား မသိ။ “၀ိဇ္ဇာ” ဖြစ်၍ လောကအကျိုး သယ်ပိုးနိုင်သူတွေထက် ”အ၀ိဇ္ဇာ” ဖြစ်၍ လောကအကျိုး ဆုတ်ယုတ်စေသူတွေ ပို၍များပြားလာသည်ဟု ခံစားခဲ့သည်။ အရင်းခံသည် အတ္တလွန်ကဲမှု "Egoism" ကြောင့်ဖြစ်သည်။ “သူများ” ထက် “ငါ” ဟူသော Egoistic ဖြစ်မှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။ Selfishness ဟူသော တစ်ကိုယ်ကောင်းစိတ်သည်လည်း အပေါင်းအဖော်ဖြစ်သည်။
အတတ်လွန်သော (၂၁) ရာစုတွင် လူသားတို့သည် မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာတို့နှင့် ကင်းဝေးကြပြီလား၊ အတော် သံသယရှိလာရသည့် အခြေအနေဖြစ်သည်။
A tooth foratooth."
ခပ်ပြင်းပြင်းစိတ်ရှိသူတို့က “မျက်လုံးတစ်ဖက်အတွက် မျက်လုံး” “သွားတစ်ချောင်းအတွက် သွားတစ်ချောင်း” ဟူသော လက်စားချေအယူအဆကို ခံယူကြသည်။ အချိန်၊ အခါ၊ အသက်အရွယ်၊ အခြေအနေတစ်ရပ်သည် အယူအဆတို့ကို အခါအားလျော်စွာ အပြောင်းအလဲပြု၏။ အရာအားလုံးသည် တစ်သမတ်သဘောမရှိ၊ “မတည်မြဲခြင်း” ဟူသည်သာ မှန်ကန်သောသဘောရှိသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံကို လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းစဉ်ကာလက လွတ်လပ်ရေး၏ ဖခင်ကြီးဟု တင်စားခံရသည့် မဟတ္တမဂန္ဒီကြီးသည် "Non-violence" ဟူသည့် အကြမ်းမဖက်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ် အယူအဆတစ်ရပ်ဖြင့် ဗြိတိသျှတို့ကို တော်လှန်ခဲ့သည်။ တစ်နိုင်ငံလုံး၏ ချစ်ခင်၊ လေးစား၊ ကြည်ညိုမှုတို့မှ ရရှိလာသော ဂန္ဒီကြီး၏ Personal Power သည် Constitutional Power, Authority Power, Military Power စသော အဘက်ဘက်ကပြည့်စုံသည့် Multi Power ပိုင်ရှင် ဗြိတိသျှတို့ကို တွန်းလှန်နိုင်ခဲ့သည်။ အိန္ဒိယတို့ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့၏။ သင်ခန်းစာတစ်ရပ်မှာ Multi Power ကို Personal Power က ပြည်သူ့အား People Power အဖြစ် အောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယ၏ ပထမဆုံး ၀န်ကြီးချုပ်မှာ နေရူးဖြစ်လာသည်။ ဂန္ဒီကြီးသည် ၀န်ကြီးချုပ်နေရူး၏ ဆရာလည်းဖြစ်သည်။
ဗြိတိသျှတို့ကို အောင်နိုင်ခဲ့ပြီးသော်လည်း ဂန္ဒီကြီးက သူ၏အယူအဆကို မပြောင်းလဲခဲ့။ ၀န်ကြီးချုပ်ကို ပြောကြားခဲ့သော သူ့စကားမှာ မှတ်သားဖွယ်ရာကောင်းသည်။
"If an eye for an eye andatooth foratooth, then soon the world becomes blind and toothless."
ရင့်ကျက်သော၊ အမှန် ငြိမ်းချမ်းရေးစိတ်ဓာတ်ရှိသော၊ နိုင်ငံကောင်းကျိုးတစ်ခုတည်းကိုသာ Mission အဖြစ်ဆောင်ရွက်သော ဒဿနဖြစ်သည်။
“မျက်လုံးတစ်လုံးအတွက် မျက်လုံး၊ သွားတစ်ချောင်းအတွက် သွားတစ်ချောင်းနဲ့သာ လက်စားချေကြစတမ်းဆိုရင် ကမ္ဘာကြီးဟာ မျက်လုံးတွေကန်းပြီး သွားတွေရှိကြတော့မှာ မဟုတ်ဘူး”
မြင့်မြင့်ကြံ၊ မြင့်မြင့်ပျံ၊ ခေါင်းဆောင်လုပ်ကြမည့်သူများ မပစ်ပယ်သင့်သော အယူအဆဖြစ်သည်။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 1:31 AM0comments Links to this post
ရှေးအခါက ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်နေ့သ၌ သူတော်စင် ရာကယသည် ဇနကဘုရင်ထံသွားပြီးလျှင် ဇနကဘုရင်အား တရားဓမ္မ ဟောကြားပြသသည်။ သူတော်စင် ရာကယ ပြန်မည်ပြုသော်အခါ ဇနကဘုရင်က ပြောလိုက်သည်။
“ကျွန်ုပ်ကို အရှင်သူမြတ် အသိဉာဏ်ပေးတဲ့အတွက် တရားအမြင်ရဲ့ တံခါး ဖွင့်ပြတဲ့အတွက် အရှင်သူမြတ်ဟာ ကျွန်ုပ်အတွက် အလွန်တရာ ကျေးဇူးကြီးမားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကျေးဇူးကို ဆပ်တဲ့အနေနှင့် ကျွန်ုပ်ပိုင်တဲ့ တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကို အရှင်သူမြတ်အား ပေးလှူလိုပါတယ်။”
ဇနကမင်းကြီးရဲ့ စကားကို ကြားရသောအခါ သူတော်စင်ရာကယ က မဆိုင်းမတွ ပြန်ပြောလိုက်သည်။
“သင်မင်းကြီးရဲ့ တိုင်ပြည်ဟာ ကျုပ်အတွက် ဘာအဓိပ္ပါယ်မှ မရှိဘူး။ တိုင်းပြည်ဆိုတာ တရားနှင့်အညီ အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့လူရဲ့  လက်ထဲမှာသာ ရှိရမယ်။ ကျုပ်ကတော့ လောကီစည်းစိမ်များကို တပ်မက်တွယ်တာခြင်း မရှိတော့တဲ့ တရားဘာဝနာအလုပ်ကိုသာ ကျင့်ကြံအားထုတ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။”
သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး၏ စကားကို ကြားရသောအခါ ဇနကဘုရင်က “တကယ်လို့ ကျွန်ုပ်အနေနှင့် လှူဖွယ်ပစ္စည်း တစ်ခုခု ပေးလှူရင်ကော” ဟု မေးသောအခါ သူတော်စင် ရာကယ က ပြန်ပြောလိုက်သည်။
“တကယ်လို့ သင်မင်းကြီး လှူဖွယ်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို လှူဒါန်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ တိုင်းပြည်ကိုမပေးဘဲ တိုင်းပြည်ပေးလှူလိုတဲ့ မာန်မာန ကျုပ်ကို ပေးလှူပါ။”